🥇 ▷ NHL 2K, ciyaarta ciyaarta ciyaarta ciyaarta barafka waxaa ku socda iPhone iyo iPad ✅
NHL 2K, ciyaarta ciyaarta ciyaarta ciyaarta barafka waxaa ku socda iPhone iyo iPad
Horyaalka xirfadleyda hockey waxay ku yimaadaan iPhone iyo iPad
Ciyaar loo diyaariyey taageerayaasha hockey barafka ayaa imaaneysa App Store waxaana sameeya kooxda 2K ee horumarineysa, sidoo kale hal abuurayaasha ciyaaraha sida NBA 2K15, waxaan ka hadlaynaa Ciyaarta NHL 2K ee iPhone iyo iPad, ciyaar aadan ka maqnaan karin hadii aad jeceshahay Hockey. Faahfaahin dheeri ah ka hel kulankaan oo soo degso hoos.
Waa maxay NHL 2K oo loogu talagalay iPhone iyo iPad?
Sanadkaan, ciyaarta caanka ciyaarta barafka ee NHL 2K ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada Soo noqo si ka wanaagsan sidii hore. Hadda waad ku qancin kartaa dhammaan rabitaankaaga ciyaarta hockey qalabkaaga qalabka ‘iOS’ adigoo uga mahadcelinaya nooca cusub ee magaca moodeellada leh ee NHL (National Hockey League).
Iyadoo la adeegsanayo NHL 2K dhamaan adeegsadayaasha NHL waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​qaababka ciyaarta cusub ee xiisaha leh, sida qaab cajiib ah oo 3-on-3 ah oo cajiib ah, dufcado cusub oo rigoorooyinka ah oo ku jira habka multiplayer iyo dhameystiran mod My Career (Shaqadayda) oo leh sawiro wanaajiyay iyo waliba cusboonaysiinta tooska ah ee sheyga.
Hubi inaad haysato waxkastoo aad ubaahantahay si aad uhesho koobka NHL2K.
Astaamaha NHL 2K ee qalabka ‘iOS’
Ciyaartan xiise baraf ee barafka leh ee loogu talagalay iPhone iyo iPad waxaad ku raaxeysan kartaa astaamaha soo socda:
Shaqadayda: Xakamee cayaar oo hel dhibcaha xirfadda si aad u horumariso dhibcaha dhowr xilli.
Minipista: jahwareer 3 vs. 3 arcade style gameplay.
Ciqaabaha: rigoore ku saleysan ku-rogaal-celinta rigoorada loo yaqaan Center Center. Wejigaaga asxaabtaada ama ku raaxee ciyaar firfircoon.
Cusboonaysiinta tooska ah ee moodellada.
La jaan qaada macruufka fog.
U soo dejiso NHL 2K iPhone, iPad iyo iPod taabashada
Haddii aadan ciyaartaan ku haynin qalabkaaga iOS weli, waxaad ku rakibi kartaa adigoo adeegsanaya xiriiriyeynta tooska ah, ka App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
NHL 2K wuxuu ku jiraa App Store, wuxuu ubaahanyahay macruufka 6.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5, iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Faransiis, Ingiriis.
Haddii aad jeceshahay Ice Hockey markaa ma joojin kartid inaad ku raaxeysato dhamaan ficilada isboorti ee ciyaarta Ciyaar xiiso leh oo NHL 2K ah oo loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada.